Qaybtii labaad dad laga keenay Sacuudiga oo Galabta laga soo…
By axadle Last updated May 30, 2020
Garoonka diyaaradaha Aadan Cadda ee Magaalada Muqdisho waxaa galabta laga soo dajiyay dad laga soo qaaday Sacuudiga oo ka dhigan qaybtii labaad soo daad-gureynta Soomaalida ku xanniban dalkaas.
Amarka dadkaan lagu soo celinayo waxaa bixiyay Madaxweynaha Xukumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana dar-dar gelinaya xubno guddi ah oo loo xilsaaray dib usoo celinta dadkaan.
Haween, Carruur iyo Rag ayay isugu jiraan dadkaan dib loogu soo celiyay dalka, waxa ay ku xirnaayeen xabsiyo ku yaalla Boqortooyada Sacuudiga, kadib markii qaarkood lasoo qabtay halka kuwa kale ay isa soo dhiibeen si wadankooda ay dib ugu soo laabtaan.
Xubnaha Guddiga Xukumadda waxa ay xalay ku dhawaaqeen in saddex jeer loo qaybiyay keenista dadkaan oo maanta ka dhigeysa markii labaad oo saacado gudahood Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde laga soo dajiyo dadkaan.
Howsha waxaa si wadajir ah u wada Safaaradda Soomaaliya ee Sacuudiga iyo guddiga ku sugan Magaalada Muqdisho si ay usoo gudbiyaan xogta dadka lasoo qaadayo iyo goobaha laga soo daabulayo.
Waaxda baarista ee Wasaaradda Caafimaadka XFS ayaa hubin ku sameynaya dadka lasoo celinayo si loo xaqiijiyo in uu haleelay cudurka iyo in ay ka caafimaad qabaan xannuunka dilaaga ah ee Covid-19.
Wali Sacuudiga waxaa ku xanniban Tiro dad Soomaali ah, kuwaas oo la qorsheynayo in lasoo daabulo saacadaha soo socda, kadib markii Dowladaha Soomaaliya iyo Sacuudiga ay ku heshiiyeen.